about | sonic re-dress
Seyi chirongwa ichi Chakagadzirwa?
Kugadziriswa kweMutinhimira chirongwa chekubatanidza chinobata nekuvavaka pamusoro pezvagara zvinozivikanwa pakati peHunyanzvi neKurapwa. Chirongwa ichi chakanangana nekuwanisa vanhu mukana wekubatana nevamwe pamasai sai, panguva ino vanhu vazhinji pasirose vasingakwanise kusangana zvakare vachigara vega. Dandemutande richange rakavhura kubva munaGunyana 2020 kusvika muna Gunyana 2021.
Seyi “kubatana” uku kwakakosha?
Kubatana nevamwe kwakakosha kupfura zvatingange tichifungidzira – inokwanisa kudzikisa kufunganya nekusuruvara, Inotibatsira kuchengetedza mafungiro, yosimudzira kuzviremekedza nekunzwa tsitsi, nekuchengetedza Utano hwedu. Nekusiyana kwedu kwese sevanhu tine zvakawanda zvakafanana.
Seyi tine Pfungwa yekugadzirwa kwemumhanzi uye zvinopinda papi muchirongwa chedu
Muhurongwa hwatinawo tine mumhanzi mishanu, zvichiratidza mafungiro mashanu emunhu, zvichanyorwa uye kutsikiswa nevanyori nevaimbi vemuAfrica.
Seizvi:Kutsamwa, Kufara, Kusuwa, Kutya neKusemeswa. Zvinyorwa zvichabatsira kuvaka zambuko kana kuva nzira yekusanganisa vanhu vakasiyana vemuAfrica. Mumhanzi uchange uchisanganisira Misambo yezviridzwa zvevanhu vemuAfrica. Hazvisi zvega kuti zvigadirwa zvinokwanisa kuumba kubatana Kuburikidza nekunzwisisa mushure vanhu zvinhu zvakakosha pamasuro pemafungiro evanhu , Asi neruzivo rwekuti mhunhu wese, chero kwaari anenge achikwanisa kuterera mumhanzi imwe chete iyoyo, Zvichibva Panzvimbo imwe chete zvichisimbisa nyaya yekuti tese tirivanhu. Muunganidzwa wezvigadzirwa zvekupedzisira zvichapakurwa numumhepo pamasai sai anopakura padandemutande.
Zano nderipi neHunyanzvi wemubati wemaoko zvakare zvichaendeswa kupi?
Hunyanzvi wakagadzirwa pamuchina pako uchiterera zvakagadzirwa, unokwanisa kuturikwa wopinda paDandemutande kubva paMusicPaint App. Mafungiro edu ese achange akagadzirirwa peji , Hunyanzvi hwako uchange wakaturikwa pane map imwe pakati penyika Nhanhatu muneChidimbu Chegarari. Ipapo unokwanisa kuwona umwe Unyazvi (Mafungiro) anokwanisa kubvumirana kana kupikisana nemafungiro ako.Unokwanisa kusarudza kuti zita rako ringe richiwonekwa pamwechete neHunyanzvi hwebasa rako, asi unofanirwa kutaura Nyika yako paMap ye Africa kuti unge uchikwanisa kukwikwidza.
Sezvinyorwa zvedu, kufanana kwedu sevanhu kuchasimbisa mushandirapamwe mukati hunyanzvi